VKSAVER ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို - မည်သို့ဖြစ်စေ - 2019
စနစ် Yandex ငွေအတွက်ဝယ်ယူမှု, ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းငွေပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်, သင်, တစ်နည်းထဲမှာ, ပိုက်ဆံအိတ်သင့်အီးမေးလ်အကောင့်ကိုဖွင့်ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ Yandex ပိုက်ဆံအိတ် replenish ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။
, refill ကိုသွားအိမ်စာမျက်နှာကိုသွား Yandex ငွေ နှင့်မျက်နှာပြင်၏အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာ, (ဒီ button ကိုပုံရိပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့တစ်ဦး "+" icon လေးအဖြစ်ပြသနိုင်ပါသည်) "Add" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျအားသွင်းဖို့မရရှိနိုင် options များဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြုမီ။
သငျသညျမှာ "ဘဏ်ကဒ်" ကိုနှိပ်လျှင်, သင်ကတ်အရေအတွက်အား၎င်း၏တရားဝင်မှုနှင့် CVC-code ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းသည်လယ်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကဒ်ဒေတာ Enter, သင်ပိုက်ဆံအိတ်အထောက်အကူပြုနှိပ်ပါရန်ဆန္ဒရှိပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ "Add ။ " ဒေတာ entry ကိုကဒ်နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လုပ်ဖို့မသကဲ့သို့သငျသညျ, "မြေပုံကိုကိုသတိရပါ" ကိုလာမယ့်တစ်ဦးကို tick သတ်မှတ်နိုင်သည်။ replenishment ဤအမျိုးအစားအတွက်ကော်မရှင် 1% ဖြစ်လိမ့်မည်။
သင်သည်သင်၏အကောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်, ဘဏ်ကဒ်နှင့် ATM စက်များနှင့်အတူတစ်ဦးပိုက်ဆံအိတ်တက်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ device အတွက်ကဒ် Place, Yandex ငွေကို select, ထိုပိုက်ဆံအိတ်၏နံပါတ်နှင့်သိုက်၏ပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။
ငါဘယ်လို Yandex ငွေ၌ငါ့ပိုက်ဆံအိတ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာဖွေကြပါ: ဖတ်ရှုဖို့အကြံပြု
အဆိုပါချွေတာသုံးစွဲဘဏ်များတွင် ATM စက်ကော်မရှင်မရှိဘဲမည်သည့်ဘဏ်တစ်ခုကဒ်နဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တက်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီ option ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ငွေပမာဏကိုရိုက်ထည့်ပါ။ ငွေကိုသင့်အကောင့်မှချည်ထားသောကြောင်းသင့်ဖုန်းမှ debited လိမ့်မည်။ "Add on" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါဝန်ဆောင်မှု Beeline, Megafon, MTS နှင့် Tele2 ၏စာရင်းသွင်းသူရရှိနိုင်ပါသည်။
ငွေသားအတွက်သင့်အကောင့်သို့ပိုက်ဆံသွင်းထားမယ့် terminal ကိုသို့မဟုတ် Sberbank ရုံးများ, ဆက်ဆံရေးရုံး, Euroset နှင့်အခြားပစ္စည်းများကို အသုံးပြု. နိုင်ပါသည်။ ခလုတ်ကို "ငွေ" ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်း, သင်ငွေသား Yandex ငွေအတွက်သင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုတက်ထိပ်ဆုံးနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာသိသိသာသာသောနေရာများနှင့်အတူရွာ၏မြေပုံမြင်လိမ့်မည်။ terminal ကိုအတွက်နိယာမ၏ replenishment ရိုးရှင်း - သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နှင့်ပမာဏ၏နံပါတ်ရိုက်ထည့်ပါ, Yandex ငွေကိုရွေးပါ။ သင်၏ပြေစာကိုကယ်တင်ရန်သေချာစေပါ။
ကအီလက်ထရောနစ်ပိုက်ဆံပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ replenishment ၏ဤအမျိုးအစားအတော်လေးရေပန်းစားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ပြန်. ဖြည့်များအတွက်လုံခြုံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် WebMoney ပိုက်ဆံအိတ်ခညျြနှောငျဖို့လိုအပ်ပေသည်။ ဤနည်းလမ်းကိုတချို့န့်အသတ်ရှိပါတယ်:
binding ၏ယန္တရားအကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အပိုင်းကိုတွေ့မြင် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှု Yandex ငွေ။
အချို့သော Internet ဘဏ်လုပ်ငန်းအဆိုပါပိုက်ဆံအိတ် Yandex ငွေပို့ပေးရန်ပစ်မှတ်ရှိသည်။ န်ဆောင်မှုများ Sberbank, Alfa ဘဏ်, Raiffeisenbank ကော်မရှင်မပါဘဲသိုက်ရန်ပုံငွေခွင့်ပြုပါ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ဝန်ဆောင်မှု Yandex ငွေသုံးစွဲဖို့ဘယ်လို
ကျနော်တို့ Yandex ပိုက်ဆံအတွက်ပိုက်ဆံအိတ် replenish မှလူကြိုက်အများဆုံးနည်းလမ်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။ ချိန်ခွင်လျှာစာရွက်တိုးပွားလာမှုအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ဦးကအပြည့်အဝစာရင်းစာမျက်နှာ replenish Yandex ငွေအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းအမျိုးမျိုးသောငွေပေးချေမှုစနစ်များထဲကနေပိုက်ဆံလွှဲပြောင်းကိုကူညီနိုင်ကြောင်းအီလက်ထရောနစ်လဲလှယ်ရုံးများ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ဤအမှု၌သာသက်သေပြကုမ္ပဏီများသည်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်၎င်းတို့၏ကော်မရှင်အရွယ်အစားနှင့် ပတ်သက်. မေးရန်သတိပြုရကြမည်။